Mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy
"Mahatsiarova ny andro Sabata hanamasina azy" - Eks. 20:8
Hoy i Jehovah: "(...) Sabatan'i Jehovah Andriamanitrao ny andro fahafito". Nohamasininy sy notahiny io andro io ary natokany ho andro fitsaharana (...) 10 no hany didy ao amin'ny didy folo izay manambara ny maha-Izy an'Andriamanitra. Manavaka an'Andriamanitra amin'ireo andriamanitra hafa io didy io. Manambara ny amin'ilay Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany, ilay Andriamanitra izay nahary ny hazo sy ny voninkazo ary namorona ny olona izany. [...] Izy no nanao ireny dia nitsahatra tamin'ny asany rehetra Izy tamin'ny andro fahafito. (...) Tsangambato nomen'Andriamanitra ny andro fahafito. —Ms, 20, 1894
Manondro an'Andriamanitra amin'ny maha-Mpahary ny lanitra sy ny tany Azy io didy io, ary manavaka an'Andriamanitra amin'ireo andriamanitra tsi-izy rehetra. Izay rehetra mitandrina ny Sabata dia maneho amin'ny alalan'izany fihetsika izany fa mpanompo an'i Jehôvah izy. Araka izany, mariky ny fiandanian'ny olona amin'Andriamanitra ny Sabata, raha mbola misy koa olona afaka manompo Azy eto an-tany (...)
Nomen'Andriamanitra henemana hiasana ny olona, ary takiny ny hanatontosan'ny olona ny asany mandritra ireo henemana fiasana ireo. Azo atao ny manao asa famonjena sy fangorahana amin'ny andro Sabata. Tokony hokarakaraina amin'ny fotoana rehetra tokoa mantsy ny marary sy ny ory. Tokony hofadina tanteraka anefa ny asa tsy ilaina (...) Ary mahakasika izay rehetra tafiditra ao am-bavahadintsika io didy io. Tokony hamela ny raharahan'izao tontolo izao mandritra ny ora masina ireo miara-mitoetra ao an-trano. Tokony hiara-manome voninahitra an'Andriamanitra izy rehetra, amin'ny alalan'ny fanompoana Azy an-tsitrapo amin'izany andro masina izany. — PP, 307,308
Raha mbola misy koa ny lanitra sy ny tany, dia mbola ho famantarana ny herin'ny Mpahary ihany ny andro Sabata. Ary rehefa tafaverina amin'ny fahatsaran-tarehiny eto an-tany indray i Edena, dia mbola hohajain'ireo rehetra ambanin'ny masoandro ny Sabata. "(...) Isan-tSabata" ny mponina ao amin'ilay tany vaovao be voninahitra dia ho avy "(..) hiankohoka eo anatrehako, hoy Jehovah". — DA, 283